Jade Dynasty ( 2019 ) | MM Movie Store
စာရေးဆရာ Xiao Ding ရဲ့ XianXia အမြိူးအစား Zhu Xian ဝတ်ထုကိုရုပျရှငျအဖွဈပွနျလညျရိုကျကူးထားတာပါ…ခေါငျးဆောငျမငျးသားကတော့ အမှောငျလောကသခငျရိလငျလောငျဂြူလို့ လူသိမြားတဲ့ ရှောငျးကနျြ့ဖွဈပွီး တှဲဖကျမငျးသမီးတှကေလညျးခသေူမဟုတျတဲ့ မုနျ့မိနျခြီ, လီခငျြ့ တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာနျော
ဒီ ဝတ်ထုကိုအရငျက ဇာတျလမျးတှဲအရှညျအဖွဈ လီရိဖုနျး, ကြောကျလိယငျ, ယနျဇီ တို့ကသရုပျဆောငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ဇာတျလမျးကတော့ တဈရှာလုံး အသတျခံရပွီး ရှငျကနျြသူ ကနျြးရှောငျဖနျးခငျြယှငျဂိုဏျးအကူအညီနဲ့ နတျတို့ကငျြ့စဉျကို လကေ့ငျြ့ရငျး…. မိဘတို့အတှကျလကျစားခခြေငျြစိတျ လှနျရငျး မိစ်ဆာလမျးစဉျရောကျသှားတဲ့ကနျြးရှောငျဖနျးတဈယောကျအကွောငျးကို သရုပျဖျောတငျဆကျထားတာပါ
ဇာတျလမျးတှဲအနနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ဇာတျကို အခု တဈပိုငျးတညျးအပွီး ကွညျ့ရမှာဆိုတော့အရငျကွညျ့ခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲထကျ ပိုကောငျးလမေလား… အရသာပဲပေါ့နမေလား…ဇာတျအိမျတှေ အခြိုးအကှတှေ့ပွေောငျးသှားလမေလား… ဇာတျလမျးလေးကွညျ့လိုကျကွပါတော့…
စာရေးဆရာ Xiao Ding ရဲ့ XianXia အမျိူးအစား Zhu Xian ဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ…ခေါင်းဆောင်မင်းသားကတော့ အမှောင်လောကသခင်ရိလင်လောင်ဂျူလို့ လူသိများတဲ့ ရှောင်းကျန့်ဖြစ်ပြီး တွဲဖက်မင်းသမီးတွေကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ မုန့်မိန်ချီ, လီချင့် တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာနော်
ဒီ ဝတ္ထုကိုအရင်က ဇာတ်လမ်းတွဲအရှည်အဖြစ် လီရိဖုန်း, ကျောက်လိယင်, ယန်ဇီ တို့ကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ရွာလုံး အသတ်ခံရပြီး ရှင်ကျန်သူ ကျန်းရှောင်ဖန်းချင်ယွင်ဂိုဏ်းအကူအညီနဲ့ နတ်တို့ကျင့်စဉ်ကို လေ့ကျင့်ရင်း…. မိဘတို့အတွက်လက်စားချေချင်စိတ် လွန်ရင်း မိစ္ဆာလမ်းစဉ်ရောက်သွားတဲ့ကျန်းရှောင်ဖန်းတစ်ယောက်အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်တင်ဆက်ထားတာပါ
ဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဇာတ်ကို အခု တစ်ပိုင်းတည်းအပြီး ကြည့်ရမှာဆိုတော့အရင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲထက် ပိုကောင်းလေမလား… အရသာပဲပေါ့နေမလား…ဇာတ်အိမ်တွေ အချိုးအကွေ့တွေပြောင်းသွားလေမလား… ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်လိုက်ကြပါတော့…
The Yin-Yang Master: Dream of Eternity ( 2021 )